Il Ricordo ⋆ အင်ဒရူး Firenze
အဆိုပါရှေးအကျဆုံး 50 သီချင်းများ
Norzi & ပတ်ဝန်းကျင်
Piero Garbin ၏စကားများ
Piero Garbin9သြဂုတ်လ 2020 . No Comments on Il Ricordo. Categories: Piero Garbin ၏စကားများ. Tags: piero garbin.
အကွောငျး Piero Garbin
အားဖြင့်အားလုံးရေးသားချက်များ View Piero Garbin
သင်သည်ဤ site ကနေသတင်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးပါလိမ့်မည်.
အမည်: အနည်းဆုံးရိုက်ထည့်ပေးပါ2ဇာတ်ကောင်
အီးမေးလ်ပို့ရန်: မှန်ကန်သော email ရိုက်ထည့်ပေးပါ
ပြည်: အနည်းဆုံးရိုက်ထည့်ပေးပါ2ဇာတ်ကောင်
အရေအတွက်က Enter 123: မှန်ကန်သောအရေအတွက်အားရိုက်ထည့်ပေးပါ
ဟောင်း Tune (Andrea Corbo)
ဆိပ်ခံတံတား Luigi Norziglia
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ di စံပယ်
ယာဉ်အသွားအလာ Stats ကတော့အသက်ရှင်နေထိုင်
သငျသညျအစဉျအမွဲ Andrius ၏ဂီတစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ?
ဒီ site ပေါ်တွင်ပြည်နှင့်ကြောင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုမြင်လျှင်ရောမမြို့မှရမရကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဂီတ Andrius စကားကိုနားမထောင်ကြဘူး.
အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပို့မည် မင်းနာမည် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ Cancel
Post ကိုမပို့ဖြစ်ခဲ့ပါ - သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစစ်ဆေး!
အီးမေးလ်ပို့ရန်စစ်ဆေးမှုများပျက်ကွက်, ကျေးဇူးပြု. ထပ်ကြိုးစားပါ
စိတ်မကောင်းပါဘူး, သင့်ရဲ့ Blog ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့စ်များကိုဝေမျှမပေးနိုငျ.
အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိနိုင်ပါသည်သေချာအောင်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ. သင်ဤ site ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက် အကယ်. အတည်ပြုခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားပါ. ကျနော်တို့သေချာသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်နိုင်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. အကယ်. သင်ဆက်လုပ်ပါငါတို့သည်သင်တို့ကအတည်ပြုကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား.အဆင်ပြေလားအဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ